MusicAll, na free Spotify gị iPhone na gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Ugbu a, anyị nwere ike ịchọta n'ọtụtụ ọrụ na-enye anyị ohere, maka mgbanwe kwa ọnwa, ịnụ ụtọ egwu anyị niile n'ebe ọ bụla anyị nọ. Ugbu a Spotify nwere ihe karịrị nde ndị ọrụ iri atọ bụ eze a na-atụghị anya ya n'ụdị ọrụ a. Ọrụ nke abụọ nke ji nwayọ na-eso mgbe ọ na-eso bụ Apple Music, kedu ka ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, ọrụ egwu egwu Apple.
Mana obughi onye obula na-ege egwu n'abali kwa ubochi ka igha aghaghi ikwughachi ugwo maka egwuru egwu egwu nke onwa. Kama, na-agakarị na ndetuta egwu ọkpụkpọ YouTube na ị na mbụ mere na gị niile ọkacha mmasị songs. Mana ọ bụrụ na ị bụ ndị ọrụ iPhone, ekele maka MusicAll, anyị nwere ike ige egwu anyị kachasị amasị anyị kpamkpam n'efu.
Storelọ Ahịa ahụ adịghị ka unlikelọ Ahịa Google, Ọ na-esikarị ike ma a bịa n'iji ngwa ndị nwere ike, na nke enweghị ike, iji ruo ụlọ ahịa niile Apple kesara na mba ahụ dum. Nke ikpeazu nke yiri ka o ghafere nzacha a bu MusicAll. Dị ka anyị nwere ike ịgụ na nkọwa nke ngwa ahụ:
MusicAll na-enye gị ụzọ kachasị mma iji kporie egwu niile n'efu na enweghị oke. Inweta music si YouTube anyị na-enye gị otu nke kasị mma na zuru ezu ngwa na ahịa.
Na MusicAll ị nwere ike ịnweta egwu niile na YouTube. Nwere ike ige ndị na-ese ihe na ọba egwu ma ọ bụ mepụta listi ọkpụkpọ nke gị na egwu kachasị amasị gị.
Hazie egwu gị niile na listi ọkpụkpọ, egwu, ọba ma ọ bụ ndị na-ese ihe. Akụkụ "Discover" na-enye gị ọhụụ kachasị ọhụrụ site na iji obere nlele ka ị nwee ike ige ibe mpe.
Na "Nyochaa" ngalaba ị nwere ike ịchọ egwu site na ụdị ma chọpụta ihe ị na-achọ na mbụ.
Ọ bụrụ n ’ihe doro anya doro gị anya, jiri nhọrọ“ Chọọ ”chọta ngwa ngwa, ndị na - ese ihe, ọba egwu ma ọ bụ listi ọkpụkpọ.
Isi mmalite nke ị ga-esi nweta ozi niile nke ngwa a na-emepụta ọ bụ onye ọzọ karịa YouTube. Na ahịa anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa maka PC, Windows ma ọ bụ ọrụ weebụ, nke na-enye anyị ohere ịrụ otu ọrụ a, mana n'oge ahụ ọ nweghị ọrụ ndị a jisiri ike nweta ikpo okwu mkpanaka.
Ọ bụrụ na ị bụ ndị ọrụ Spotify, ịnwere ike ịchọpụta na ọrụ yana ọtụtụ menu na nhọrọ dị ka ndị ahụ dị na ọrụ egwu egwu nke ụlọ ọrụ Sweden. Androiddị gam akporo na-enye anyị ohere ibudata egwu ahụ Gee ya ntị na-enweghị mkpa njikọ, agbanyeghị, ụdị iOS enweghị nhọrọ ahụ, agbanyeghị na ndị mmepe ahụ kwuru, ndị Spain anọ bi na León na-arụ ọrụ ịnye ya n'oge na-adịghị anya.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ iOS, egbula oge na nbudata ngwa a n'ihi na ọ ga-abụ na ọ ga-adịru awa ole na ole na Storelọ Ahịa App.
Budata MusicAll maka gam akporo site na weebụsaịtị, ebe ọ bụ na ọ dịghị na Google Play
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » gụgharia » MusicAll, free Spotify maka iPhone na gam akporo gị
Ruo otu afọ enwere m ngwa a mana ekwentị m tufuru ma enweghị m ike ịgagharị ya ọzọ, ana m akwado ya n'ihi na ọ dị ezigbo mma
Ọrụ 5 iji chekwaa foto gị niile n'igwe ojii n'enweghị nsogbu